हेर्नुस् ! ६५ वर्षको बूढो उमेरमा विवाह गरिन्,अहिले श्रीमानले यतिसम्म गरेर छोडी हिडे (भिडियो हेर्नुस्) - Onlines Time
बुढेसकालमा एक अर्काको साहारा हुन्छ भन्ने बिबाहित जोडिहरुको एउटा सोच हुने गर्दछ बिबाह गर्दा । तर बुढेसकालमा नै बिबाह गर्दा पनि एक महिला अहिले एक्लै भएकी छिन ।
बुटवलकि राममाया सुनुवारले करिव ६५ वर्षको उमेरमा साहारा हुन्छ भन्ने सोचले बिबाह गरिन । तर जो सगँ बुढेसकालमा साथै भैइन्छ भन्ने सोचले बिबाह गरिन उसैले बिबाह गरेको केही दिनमा नै छोडेर गए पछि उनी अहिले मिडियामा आएकी छिन । राममाया र कृष्णबहादुर दुबै उस्तै उस्तै उमेरका हुन ।
पहिलो श्रीमानसगँ करिव ३० वर्ष अघि छुट्टीएर बसेकी राममाया दिदिको घर तथा कहिले माइती तिर बस्दै आएकी थिइन । प्राय दिदिको घर ईन्डिया तिरै बस्दै आएकी राममाया दाजुभाईको घर आएको बेला कृष्णबहादुरसगँ चिनजान पछि दाजुभाइहरुकै सल्लाह अनुसार बिबाह गरिन ।
भुपु इन्डियन आर्मी रहेका कृष्णबहादुर सुनुवारको पनि पहिलो श्रीमती बितेर एक्लै थिए । दुबै जना उस्तै उस्तै भए पछि एक अर्काको सहारा हुन्छ भन्ने सोचले बिबाह उनिहरुको परिवारकै सल्लाह अनुसार भएको राममाया बताउँछिन ।
ईन्डिया कै देहरादुन घर भएका कृष्णबहादुर पनि आफ्नो दाजुभाइको घर नेपाल आएको बेला दुबैको परिवार बिच सहमति मै बिबाह भएको राममायाको भनाई छ । दाजुले नै सामान्य टिकाटालो गरेर पठाए पछि ४ दिन आफुहरु सगैँ बसेको उनले बताईन ।
४ दिन पछि पुन दाजुकै घरमा दुबै जना आए पछि कृष्णबहादुरले घर देहरादुन जाने भनी दुबै जनाको टिकट पनि ल्याएको राममाया बताउँछिन । बिबाह गरि पुन दाजुको घरमा अब देहरादुन जान भनी बिदा माग्न आफुहरु आएको उनले बताईन ।
Prevपेट फुलिएका श्याम उपचार अब बाँच्ने आशा पलायो ,आफन्त कसैले गरेनन सहयोग १२ वर्ष पछिको खुशी हेर्नुस् (भिडियो हेर्नुहोस)
Nextहेर्नुस् ! १५ वर्षदेखि हराएका छोरा बुहारी फर्किएर आए,आमाले यसरी रु दै अंगालो हालिन छोरालाई (भिडियो हेर्नुस्)